Voina · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Avrily, 2011
Amerika Latina 30 Avrily 2011
Anatin'ny mena faratampon'ny fampitandremana i Kolombia noho ny oram-baventy. Mponina aminà departemanta 28 no voadona mafy tokoa: tondradrano, tany mihotsaka ary fiakarana tampoky ny renirano sy ireo riandrano kely izay namela tra-boina maherin'ny telo tapitrisa sy sasany.
Chile: Nanafaingana Ny Fitaterana Taova Ny Mpitsabo Mpanampy iray Tamin'ny Alalan'ny Twitter
Amerika Latina 27 Avrily 2011
Cristina Bizama (@cristi_enf), mpitsabo mpanampy ao amin'ny tobim-pitsaboana Talca any Chili, dia nahavita nanafaingana ny fitaomana ny taova hafindra avy any Talca mankany Santiago renivohitra, any amin'ny 260 kilometratra miala avy ao. Tweet iray no nanombohan'ny zava-drehetra: "Tsy mampino! Tsy misy fomba hitaterana taova 5 mankany [Santiago]." Avy hatrany dia nandray andraikitra ny vondrom-piarahamonin'ny Twitter.
Fanadihadiana miaraka amin'i Gaël Brassac, Mpandika Teny Global Voices
Frantsa 16 Avrily 2011
Tohizanay ny famoahana ny mombamomban’ ny Mpandray anjara Global Voices amin'ny teny malagasy, izay mpandray anjara mavitrika manome fahafaham-po ho an'ireo mpamaky ny lahatsoratra bilaogy amin'ny fiteny maro samihafa. Ny fitiavana firenena manokana matetika no antony iray mahatonga ny mpamaky lasa mpandray anjara ato amin'ny Global Voices. Japana no tena...
Serbia: Famaliana ny soa nataon'i Japoney
Azia Atsinanana 08 Avrily 2011
Manao tatitra mikasika ny finiavan'ny vahoaka Serba eo amin'ny fanampiana ireo Japoney niharam-boina tamin'ny zava-doza niseho i Sasa Milosevic ary namaly am-pankasitrahana ny fanampiana natolotr'i Japana ho an'i Serba ny vahoaka Serbiana.